အမေးအဖြေများ - Dongguan Zhantuo Optical မှန်ဘီလူး Co. , Ltd မှ
ဂျီပီအက်စ်ရဲ့ Navigator ကား HUD မှန်ဘီလူး
နားကြပ် AR တိုးပွား Realit သံခမောက်လုံးမှန်ဘီလူး
ရောင်ပြန် Coating မှန်ဘီလူး
အလင်းဆုံ & Aspherical မှန်ဘီလူး
Prism ကို & cylindrical ကြေးမုံ
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးစီးရီး
ချိန်ညှိတိုးတက်ရေးပါတီ Multifocal မှန်ဘီလူး
acrylic display ကိုရပ်တည်ချက်
အတု REVO Coating
မှိုဒီဇိုင်း & လုပ်ခြင်း
optical ကြေးမုံ Polish
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက optical ထုတ်ကုန်အားလုံးလုံးနှင့်မဟုတ်တဲ့အလင်းဆုံမှန်ဘီလူးမျိုး, VR 3D မှန်ဘီလူး, LED မှန်ဘီလူး, ပွင့်လင်း acrylic ထုတ်ကုန်များမှာ ( အနုပညာအကျင့်ကိုကျင့်, အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်ဟိုတယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, စာရေးကိရိယာ, စသည်တို့ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုဆောင်းပါးများ, ) , HUD projection မှန်ဘီလူး, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဦးထုပ် visors, အားကစားမှန်ဘီလူး (နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးမှန်ဘီလူး, ရေကူးမှန်ဘီလူး, စက်ဘီးပြိုင်ကားမှန်ဘီလူး), နေကာမျက်မှန်မှန်ဘီလူး, စက်မှုအကာအကွယ်မှန်ဘီလူး, အမျိုးမျိုးသောအထူး-shaped ကွေးမျက်နှာပြင်မှန်ဘီလူး, ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်မှို။
သငျသညျ OEM ထုတ်လုပ်မှုပေးနိုငျပါသလော
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ client များ '' ရေးဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာအဆိုအရဘက်ပေါင်းစုံန်ဆောင်မှုများမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကသင်၏အတွေးအခေါ်များနှင့်ဆက်စပ် parameters များကိုပေး အကယ်. သေချာတာပေါ့, ငါတို့သည်သင်တို့၏အတည်ပြုချက်ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုချောင်းမြောင်း၏စာရွက်စာတမ်းများစီစဉ်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ အမိန့်ခင်မှာကျနော်တို့ဒီဇိုင်းကိုအခကြေးငွေလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်း, ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒီဇိုင်းကုန်ကျစရိတ်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
ဝတ်ဆင်, ခြစ်ရာကနေကုန်ပစ္စည်းကာကွယ်တားဆီးဖို့နှင့်ဆန့်ကျင်ထိခိုက်မှု: ကိုခိုင်ခံ့စေ
ဆေးဆိုး: ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းဖြစ်စေလျက်, ကုန်ကြမ်းအတွက်ခြယ်ပစ္စည်း Add
Electroplating: အ gradient ကိုအရောင်များ, ရေ, ငွေအရောင်တွေ, ထုတ်လုပ် ရောင်စုံအရောင်များ လှပသောမျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့, စံနမူနာများတွင်လည်းကောင်း, စသည်တို့။
အပေါ်ယံပိုင်း: စတာတွေဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်ရုပ်ရှင်, AR ရုပ်ရှင်, ဆန့်ကျင်လက်ဗွေရုပ်ရှင်, plating ထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင်၌, optical ပါးလွှာရုပ်ရှင်နဲ့လေဟာနယ်နည်းပညာအသုံးပြုခြင်း
ဒါဟာကြီးမားတဲ့ထုတ်လုပ်မှုလျှင်တိကျသောထုတ်ကုန်အဆိုအရနမူနာတာဝန်ခံ, ငါတို့သည်ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်တို့အဘို့နမူနာ version ကိုအခကြေးငွေပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
ပြီးနောက် payed နမူနာ version ကိုအခကြေးငွေ, client ကိုကို Confirm ဖိုင် / ကအီးမေးလ်ပေးပို့ထုတ်ကုန်များ၏ရှုပ်ထွေးသည်နှင့်အညီ, ငါတို့စမ်းသပ်သေ၏ကာလအကဲဖြတ်ရန်နှင့်အချိန် proofing ။ နမူနာ version ကိုဖြန့်ဝေလေ့5မှ 10 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအသှေးကိုအတည်ပြုရန်စာရင်းနမူနာလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့အမြည်းပေးနိုငျ, သင်ရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပေးဆောင်လိုအပ်ပါတယ်။
TNT အားဖြင့်နမူနာပေးပို့ခြင်း , UPS , FedEx , DHL Express ကို။
သင်တို့သည်ငါတို့၏အရောင်းစာရေးကိုမေးကျေးဇူးပြုပြီးအသေးစိတ်သိလိုပါလျှင် website တွင်အဆိုပါဓာတ်ပုံများကို, စက်ရုံကထုတ်လုပ်သာလျှင်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နေကြသည်။
ထုတ်ကုန်၏အရွယ်အစားနှင့်အရှုပ်ထွေးအဆိုအရမှိုပွင့်လင်းအချိန်တစ်ခုတည်း set ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အချိန်ပြီးစီးစေခြင်းငှါ, မှိုလိုင်အရေအတွက်ကိုအကဲဖြတ်ရန်အမိန့်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရနှင့်မှိုအရေအတွက်ကကော်ပီကူး။ နမူနာအဆုံးအဖြတ်သို့မဟုတ် 20-30 နေ့ရက်ကာလအဘို့, အထွေထွေမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုသံသရာဆွဲပြီးနောက်။
နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက် 3k ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့မှာလည်းရှုပ်ထွေးအမိန့်၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏကြိုဆိုပါတယ်, ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားကြလိမ့်မည်။ အမိန့်ကြီးမားများမှာလျှင်, ငါတို့သည်အဆင်သင့်ကုန်ကြမ်းစျေးနှုန်းများအရစီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဒါကြောင့်ကျနော်တို့စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းပေးနိုငျနိုငျသညျ။
မှိုကာလ, အမိန့်ပမာဏနှင့်အမိန့်သည် mold.Delivery ထုတ်ကုန်အောင်ပြီးနောက် 20 ရက်အတွင်းယေဘုယျကျနော်တို့လိမ့်မယ် Delivery ထုတ်ကုန်၏အစီအစဉ်အရသိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးစံချိန် VR မှန်ဘီလူးများအတွက် 1day အတွင်း 50000 ဖြစ်ပါတယ်
စသည်တို့ကိုဘုံ EXW, FOB, CIF,
ချောချောမွေ့မွေ့သေချာအားလုံးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မှုစေရာ ISO9001, SGS စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနှင့်ပို။
ကျနော်တို့ပေးသွင်းနိုင်ရန်ပေးပို့နှင့်ထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းသေချာစေရန်ပေးသွင်းဖို့ဝယ်မယ့်ငွေပေးချေမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်, အလီဘာဘာပေးမယ့်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သောအလီဘာဘာကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျ Alibaba အပေါ်ငွေပေးချေခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ် paypal ကိုသုံးနိုင်သည်။ အကြီးစားကုန်ပစ္စည်းများကျနော်တို့ paid T / T 30% သိုက်, BL ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင်ပေးဆောင်ချိန်ခွင်လျှာချမှတ်။
ဟုတ်ကဲ့, သင်လုပ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အများကြီး forwarding နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သင်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အချို့ကို forwarding အကြံပြုနိုင်ပါတယ်သင်စျေးနှုန်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
Humen / ရှန်ကျန်း / ဟောင်ကောင်
ရှန်ကျန်း Bao'an အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်ပါသည်, Guangzhou- Baiyun အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနည်းငယ်ဝေးပါပဲ။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုတက်ကောက်ဖို့ဒရိုင်ဘာစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်, သင့်သွားရောက်ခြင်းမပြုမီကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါ။
1, စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး-Professional ကကိုးကား
2, စျေးနှုန်း, ခဲအချိန်, အနုပညာ, ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းစသည်တို့ကိုအတည်ပြုပါ
5, ကနဦးထုတ်လုပ်ခြင်းကျနော်တို့ကငွေပေးချေမှုတယ်သော client များအဆင့်-အသိပေး, သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုအညီနမူနာစေမည်, သင့်ခွင့်ပြုချက်ရရန်သင့်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်နမူနာပေးပို့ပါ။ ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်မှုစီစဉ်မည်ကိုအကြောင်းကြား & ခန့်မှန်းအချိန်အကြောင်းကြား။
6, အလယျပိုငျးအသငျသညျတှငျသငျ့ထုတ်ကုန်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပြသနိုင်ဖို့။ ပြန်ခန့်မှန်းပေးပို့အချိန်ကိုအတည်ပြုဓာတ်ပုံများထုတ်လုပ်မှု-ပေးပို့ပါ။
7, အဆုံးထုတ်လုပ်မှု-Mass ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်ဓါတ်ပုံများနှင့်နမူနာသင်သည်လည်းတတိယပါတီစစ်ဆေးရေးစီစဉ်နိုငျသညျ, ခွင့်ပြုချက်အဘို့သင်တို့ဆီသို့ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
8, Clients တွေအနေနဲ့ချိန်ခွင်လျှာများအတွက်ငွေပေးချေစေနှင့်ကျွန်တော်ရေကြောင်းကုန်စည်စီစဉ်ပါ။
9, အမိန့်ကိုသင်ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိသည့်အခါ "ပြီးအောင်" နှင့်သူတို့နှင့်အတူကျေနပ်လို့ပြောနိုင်ပါသည်။
အရည်အသွေး, ဝန်ဆောင်မှု, Market ကတုံ့ပြန်ချက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုမှတုံ့ပြန်ချက် & အကြံပြုချက်။ ငါတို့သည်ပိုကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကကျနော်တို့တိပေးပို့များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်သေချာ, ပြည့်စုံမှိုနဲ့ automatic အသီးအနှံပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျော် 10 နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ဒါကကျနော်တို့ကအမိန့်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပြဿနာများ preview နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ဖို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေအန္တရာယ်ကောက်ချက်ချရန်သေချာစေမည်။
Service ကိုထောက်ပြ point
တဦးတည်းရောင်းအားထွက်တင်ပို့ထုတ်ကုန်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ထံမှသင်တို့အစေခံမည်သူကိုယ်စားပြုရှိသေး၏။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်စဉ်အတွင်း, သင်ရုံအပေါငျးတို့သပြဿနာများအတွက်ယျတျောနှငျ့အတူဆှေးနှေးဖို့လိုနှင့်လမ်းအများကြီးအချိန်ကုန်သက်သာ။
တစ်ဦးချင်းစီအမိန့်အဘို့, တင်းကျပ်စစ်ဆေးခံရရေကြောင်းရှေ့တော်၌ထို QC ဌာနကဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်။ မကောင်းတဲ့အရည်အသွေးနှင့်အခွအေနေတံခါးကိုအတွင်းရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်။
88, Xin'an လမ်း, Humen မြို့, Dongguan, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်